Umhobe 57 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu:ekumbalekeni kwakhe uSawule emqolombeni. Ndibabale, Thixo,ndibabale; Ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam; Ndizimela esithunzini samaphiko akho, Kude kudlule inkxwaleko.
Ndinqula uThixo Osenyangweni, UThixo ondifezelayo.
Uya kuthuma esemazulwini andisindise, Emngcikiva nje ondizondayo; (Phakamisani.) UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe.
Umphefumlo wam uphakathi kweengonyama; Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo, Oonyana babantu abamazinyo aziintshuntshe neentolo, Ulwimi lwabo lulikrele elibukhali.
Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
Isibatha basilungisele iinyawo zam; Bawugobile umphefumlo wam; Bandimbela isihogo, Beyela kuso ngokwabo. (Phakamisani.)
Izimasekile intliziyo yam, Thixo, izimasekile intliziyo yam; Ndiya kuvuma, ndiya kubetha uhadi.
Vuka, luzuko lwam! Vukani, mrhubhe nohadi! Ndiya kusiphangela isifingo.
Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Nkosi yam; Ndiya kukubethela uhadi phakathi kwezizwe.
Ziphakamisele ngaphezu kwezulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.